Haa dheh aftida loo qaadaayo 110 – Ku saabsan aftida 110
regon waxa ay bartanka kaga jirtaa dhibaatada balwadaha. Dad aad u tiro badan oo reer Oregon ah ayaa la halgamaya ciladda daroogada. In yar oo ka mid ahna waxay heli karaan daaweyn ka caawin lahayd inay noloshooda dib ugu soo ceshadaan.
1 ka mid ah 11kii reer Oregon waxay la halgamayaan cillad isticmaalka maandooriyaha
Dhanka kale, sharciyadayada daroogada ee hadda jira waxay burburin karaan nolosha iyagoo ku salaynaya hal qalad, ka horjoogsada dadka inay helaan shaqo, meel ay ku noolaadaan, amaahda ardayda, laysanka xirfadda, ama xitaa kaarka amaahda.
Halkii dadka looga xiri lahaa haysashada qadar yar oo daroogo ah, aftida loo qaadaayo 110 waxay si weyn u ballaarin doontaa marin u helka daaweynta daroogada iyo adeegyada soo kabashada ee qof kasta oo doonaya oo u baahan, oo ay ku bixiso lacagta canshuurta marijuana ee jirta. Tan waxaa ka mid ah:
Abuuritaanka Xarumaha Soo-kabashada Maandooriyaha ee gobolka oo dhan si isla markiiba loo qiimeeyo baahiyaha dadka isticmaala daroogada, laguna xirayo daaweynta, daryeelka iyo adeegyada. Xarumahan waxaa dagan kara ama ka shaqeyn kara bixiyeyaal aqoon leh oo jira.
Kordhinta helitaanka adeegyada, oo ay kamid yihiin:
Daaweynta ku saleysan caddayn, dhibaatada oo si dhab ah loo tabiyo, ka jawaabid hab dhaqameedkeena iyadoo saldhig uu u yahay bukaanka;
Caawinta dadka isku filka ah iyo adeegyada soo kabashada si dadku ay u awoodaan inay nadiif ahaadaan oo ay miyir qab ku noolaadaan;
Guriyeynta (xasilinta iyo kala-guurka) ee loogu talagalay dadka qaba dhibaatooyinka maandooriyaha;
Wax ka qabashada waxyeellada iyo faragelin oo ay ka mid yihiin ka casharo ku saabsan ka hortaga isticmaalka xad dhaafka ah ee maandooriyaha, helitaanka naloxone hydrochloride iyo waxbarashada kale ee daroogada iyo wacyigelinta.
Sharcigani maahan mid sharciyaynaaya daroogooyinka.
Waxay ka saareysaa ciqaabta fal dambiyeed ee ku saabsan lahaanshaha heerarka hoose ee dhammaan daroogada, oo hadda lagu sifeeyo inay yihiin dambiyo, lagu beddelayo ganaax. Ganaaxyadan waxaa laga dhaafi karaa iyadoo lagu qiimeeyo Xarumaha Soo-kabashada Maandooriyaha, oo laga heli doono dhammaan qaybaha gobolka, 24ka saacadood maalintii.
Wax isbedel ah laguma sameyn lambarka dambiga ee gaarsiinta, waxsoosaarka, iyo dambiyada ganacsiga kale ee ganacsiga. Dembiyadaani waxay sii ahaanayaan dambi.
Wax isbedel ah looma sameyn dembiyada kale ee la xiriira isticmaalka daroogada, sida wadista baabuurta adigoo daroogaysan iyo xatooyada.
Sharcigu wuxuu dhisayaa Golaha Kormeerka iyo La Xisaabtanka oo ka kooban khabiiro ka shaqeeya daaweynta daroogada iyo soo kabashada. Waxaa ku jira dad ka socda bulshada oo si aan ku habboonayn saamayn ugu yeelatay xaaladda jirta. Xubnaha Golaha ayaa ka mid noqon doona:
Dhakhtar ku takhasusay daawada qabatinka.
Saddex xubnood oo bulshada ka mid ah oo si aan habboonayn uu saameyn ugu yeeshay habka aan hadda wax uga qabano isticmaalka daroogada kaasoo xooga saaraaya xerid iyo xabsi ku aruurin.
Ugu yaraan laba qof oo ay dhibaato ka soo gaartay dhibaatada ay leedahay isticmaalka maandooriyaha.
Xerfadyahan shaqaalaha adeega bulshada oo shati ku haystaa .
Wakiil ka socda Maamulka Caafimaadka Oregon.
Daryeel bixiye adeega yaraynta waxyeelada.
Daryeel bixiye wax ka qabta cilladda isticmaalka mukhaadaraadka.
Cilmi baare aqoonyahan ah oo ku takhasusay isticmaalka daroogada ama siyaasada daroogada.
Ugu yaraan laba qof oo ka soo kabatay isticmaalka daroogada.
Daryeel bixiye qaabilsan xanuunada dhimirka iyo dabeecadda.
Wakiilka urur daryeel isku dubaridan.
Qof u shaqeeya hay’ad samafal oo u dooda dadka khibrad u leh ama khibrad u leh cilladda isticmaalka maandooriyaha.
Oo ay taageerayaan Maamulka Caafimaadka Oregon, Koonsilku wuxuu go’aamin doonaa sida lacagta loo qaybin doono si loo siiyo codsadayaasha kordhinta helitaanka bulshada ee daryeelka iyo hirgelinta Xarumaha Soo-kabashada Maandooriyaha..
Isla xisaabtan dhab ah
Xoghayaha Gobolka Oregon, Qeybta Hantidhawrka ayaa sameyn doona hanti dhowr iyo maaliyad waxqabad. Xisaabinta, oo si guud loo heli doono, waxay dhici doontaa ugu yaraan hal mar labadii sanaba mar waxaana lagu dari doonaa xogta:
Kormeerka maaliyadeed ee barnaamijyada deeqaha, oo si sax ah u muujinaya ururada iyo barnaamijyada ay heleen lacagta, inta ay heleen, sida lacagtaas loo isticmaalay, imisa lacag ayaa loo isticmaalay in lagu maareeyo barnaamijyada;
Ku guuleysiga helitaanka adeegyo badan oo daaweyn ah oo loogu talagalay dadka oo ay ku jiraan natiijooyinka adeegyada daaweynta / soo kabashada, waqtiyada sugitaanka ee daaweynta la helayo, celceliska muddada kaqeybgalka macmiilka, heerarka dhammaystirka, soo noqoshada, awoodda macaamiisha ee helitaanka guryo taageero ah, shaqo iyo dakhli loo qaateyn ah.
Halkan guji si aad u hesho macluumaad dhamaystiran ah oo ku saabsan aftidan.
Hindisanahi ma soo korhdinaayo in la qaado canshuur dheeraad ah
Taas badalkeeda waxa uu ku tiirsanaan doonaa dakhliga canshuuraha laga hello Marijuan-ha.
Waxaa jira lacag badan oo canshuurta marijuana ka badan intii la filayay. Marka Xeerka Daaweynta Daroogada iyo Soo-kabashada Maandooriyaha uu dhaqan galo, dakhliga canshuuraha marijuana waxaa la filayaa inuu wadar ahaan gaaro $ 145 milyan sanadkii. Dakhliga la ururiyo in ka badan $ 45 milyan sanadkii wuxuu aadi doonaa adeegyada loogu talagalay daaweynta, soo kabashada, yareynta waxyeelada iyo waxyaabo kale oo badan.
Waqtiga ay Oregon ku jirto kaalinta ugu dambeysa ee qaran ee bixinta daaweynta iyo adeegyada soo kabashada markay dadku weydiistaan, tani waxay u taagan tahay 395% kororka kharashyada dadweynaha ee aan ahayn Medicaid ee isticmaalka maandooriyaha..
Waqti Dheeraad ah oo ay Boolisku Diirada ku saarayaan waxa muhiimka ah
Saacad kasta, booliiska Oregon waxay qof u qabtaan daroogo — xilli carruur badan oo reer Oregon ah la la’yahay, dilal aan la xallin iyo dib-u-dhac dheeraad ah oo kiisaska aan walli go’aan laga gaarin, Taalabadani aftida loogu qaadaayo waxay booliska u sahlaysaa in ay xooga saaraan waxa muhiimka ah.
8,900 dadka reer Oregon ah ayaa sanad kasta la xeraa—taasoo u dhiganta in saacadiiba la xero hal qof